DAAWO: Khudbadda Musharrax Sheekh Shariif “Dastuurkii maanta yaal waa kii 2012” – Puntlandtimes Hoyga Wararka Somalia
DAAWO: Khudbadda Musharrax Sheekh Shariif “Dastuurkii maanta yaal waa kii 2012”
May 12, 2022 Xuseen 3
Kan Gaararaa midabada badesho.Waana layaqaan tariikhtiisa. Laakiin waxaan aaminsanahay nimanka walaaleheen Hawiye in ay Xariif yihiin. Waxay ogyihiiin in Darood Soo noqonayo laakiin waxay rabaan mid dhaciif ah sida Saciid Deni.
Adiga oo uu Rabbi (SWT) muslim kuudhaliyay oo kaadhigay, ma xurriyad iyo xuquuq baa kaamaqan?
Saaxiib, waxan aad kuhadaaqday waa beenta iyo beenahawaasnimada ay reer Galbeedku isku dayaan inay caalamka kusiraan oo ku indhasarcaadiyaan, si ay caalamka gumeysigooda dadban ugu xayndaabtaan oo sidaasna ku dhaqan iyo dhalan zuuliyaan.
Ma ogtahay in waagii ay Diinteenna Islaamku caalamka siwalba u iftiiminaysay ay reer Galbeedka haddeer isukaaya xariifinaya kusugnaayeen casrigii ay iyaguba ugu magacdareen ” The Dark Ages”?
Mase ogtahay in culuumta ay iyagu haddeer kufaanayaan kadhaxleen Khilaafadihii Islaamka iyo culimadii muslimka ee dunida ugu caansan ilaa maantadan? Averoes (Ibnul Khaldun) yuu ahaa? Avicenna (Cali Ibn Sinaay) – The Father of Modern Medicine – yuu ahaa?
Dimuqraaddiyadda, doorashada, xurriyadda, iyo xuquuqda nafleeyda iyo dabiiciga ee hadda la inagu harowsanayo dhammaantood Islaamka ayaa keenay oo lagana dhaxlay. Diintaada iyo dhaxalkaaga Islaamka dib ugu noqo oo soo daras fadlan oo waqtiga qaaliga ah ku lummi inta aan meel cidla ah lagaa harowsanin.
Soomaaliya iyo Soomaaliba abidkood kuma xasili doonaan nidaam aan Islaami ahayn.
Waxaan la ii sheegay in Sharifka iyo Xasan Sh ba guryo ka dhisteen Kuna leeyihiin Magaalooyinka dalxiiska Iyo waaweyn ee Turkey, ballan qaadyada ma ku dareen in ay handida soo celin doonaan.
Sucuudiga waxaan ku arkay kabdho dhiban oo canabaya oo leh xasan sh baa in aan shaqaale xaafadeed noqono nugu soo khiyaamay.
Xiligii adkaa ee wada hadalka badda wax taakeero wadinayadeed ah kamaanaan Helen madaxweynayaashii hore xataa kii ay xiligiisii la saxiixay is afgardkii
Marka nin aan soo aragnay mar hore oo aan naqaan wuxuu yahay ma soo celineen lkn nin soori qaaday baa codeynaya ee RABBI mid khayr leh ha inoo dooro